၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၂၁ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံရုံးနှင့် Business France တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော Symposium on Energy Sector in Myanmar အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈:၀၀ နာရီမှ ၁၉:၀၀ နာရီအချိန်ထိ နေပြည်တော်ရှိ M Gallery Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ Business France ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြသော ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် Total ၊ AFD ၊ SYNDICAT DES ENERGIES Renouvelables နှင့် eDF တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြသည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသော ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူ များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြပါသည်။
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် US Energy Information Administration (EIA) ၏ စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်များအားလုံးအပေါ်တွင်အခြေခံသော ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၄၀ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှုန်းသည် နှစ်စဉ် ၂၈ % တိုးမြင့်၍ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင် တိုးတက်သုံးစွဲမှုနှုန်းသည် နှစ်စဉ် ၂.၃ % ခန့်ရှိနေပြီး၊ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ သိသာစွာ မြင့်မားနေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းမှ အဆိုပါလိုအပ်ချက်ကို ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများသော လောင်စာဆီ စျေးနှုန်းနှင့် အတူ လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကုန်ကျမှု မြင့်မား လာခြင်းကို နိုင်ငံအားလုံးရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အနာဂတ်တွင် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ သုံးစွဲမှုအပေါ်မှီခိုနေမှုအား လျှော့ချရေးအတွက် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ပိုမိုစွမ်းအားထက်မြက်သော စွမ်းအင်သစ်များ ဖော်ထုတ်ရေးအား အလေးပေး ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ၍ ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအမံနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပြည်တွင်းစွမ်းအင် လိုအပ်ချက်အား ပြည့်ဝစွာဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးနှင့် အနာဂတ်စွမ်းအင်ဖူလုံရေးတို့အတွက် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယခင်နှစ်အနည်းငယ်က မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း ၏ ၃၀% ခန့်ကိုသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ၅၀ % အထိ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၀၀ % အပြည့်အဝ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန် စီမံချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှုန်းမှာ ၁၅ % မှ ၁၉ % အထိ တိုးမြင့် လာနေပြီး ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ ပိုမိုတိုးမြင့်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ထပ်မံ လိုအပ်လာမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၃၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်အတွက် ရေနံသဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည် (Liquefied Natural Gas - LNG) အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သောစီမံကိန်း ၃ ခုနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး Combined Cycle Power Project ၁ ခုတို့အား အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာတစ်ခု (Medium Term) အနေဖြင့် အသုံးပြုသွားရန်အတွက် Notice to Proceed လက်မှတ်ရေးထိုး၍ စီမံကိန်းများစတင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်း တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသော ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအား အဆင့်လိုက် သုံးသပ်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိရာ စီမံကိန်းအချို့မှာ တည်ဆောက်လျက် ရှိပြီး၊ အချို့မှာ စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်နိုင်မှုအတွက် လေ့လာသုံးသပ်လျက်ရှိရာ စီမံကိန်းများ၏ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား စက်တပ်ဆင်မှုစွမ်းရည် စုစုပေါင်း ၁၃၅၅ မဂ္ဂါဝပ်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့အတူ နေစွမ်းအင်၊ လေစွမ်းအင်နှင့် အခြားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကိုလည်း သုံးသပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၄၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ နေစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုအား မင်းဘူးမြို့နယ်တွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး မကြာမီ နိုင်ငံ၏ မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်သို့ ချိတ်ဆက်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ ပေါများသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန်သင့်လျော်ပြီး ရေရှည် တည်တံ့၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုပမာဏ ကြီးမားသည့် စွမ်းအားအရင်းအမြစ် များအား မှန်ကန်စွာစုစည်းအသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုသင့်လျော်ကြောင်း၊ အနာဂတ် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုတွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အား ၈ % မှ ၁၂ % အထိ တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုကဏ္ဍတွင် တည်ငြိမ်သော ဓာတ်အားစနစ်ပို့လွှတ်နိုင်ရေးအတွက် 230 kV မှ 500 kV ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်သို့ အဆင့်မြှင်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဒုတိယကုန်သွယ်မှုအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော မြဝတီမြို့တွင် ၂၃၀ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံအသစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံတော်၏ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်နှင့် မြောက်ဖက်ပိုင်းဒေသများတွင် 500 kV ပြည်ထောင်စုမဟာဓာတ်အားလိုင်း ၄ လိုင်းအား ထပ်မံ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအစီအစဉ် အရ ကျေးရွာများ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးကို အထူးအလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၃၀ ခုနှစ် တွင် နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်ကွန်ရက်နှင့် သီးခြားဓာတ်အားစနစ်ကွန်ရက်များမှ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု ၁၀ သန်းအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အဝဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေး ရည်မှန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေတူးဖော် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် ၅၁ ကွက်နှင့် ကုန်းတွင်းလုပ်ကွက် ၅၃ ကွက် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခဲ့ရာ ကုန်းတွင်းလုပ်ကွက် ၂၁ ကွက်တွင် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ ၁၄ ခုနှင့် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် ၃၆ ကွက်တွင် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ ၁၈ ခုတို့မှ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ ရှာဖွေရေး၊ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ ​ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ ရတနာ၊ ရဲတံခွန်၊ ရွှေနှင့် ဇောတိက စသည့် စီမံကိန်း ၄ ခုမှ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ နေ့စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ ၁.၃ ဘီလီယံ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပြီး၊ ပြည်တွင်းသုံးအတွက် နေ့စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ ၄၀၀ မီလီယံ ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိ ကြောင်း၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လက်ရှိ ရေနံချက်စက်ရုံ များနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများ တည်ဆောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်မှာ နှစ်များစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ သောကြောင့် စွမ်းရည်အပြည့်အဝဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်ပမှ စက်သုံးဆီတင်သွင်းမှုလျှော့ချနိုင်ရေး၊ ပြည်တွင်းမှ အဆင့်မြင့်စက်သုံးဆီ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး နိုင်ရေးအတွက် ရေနံချက်စက်ရုံများနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများ အရည်အသွေး အပြည့်အဝ လည်ပတ်နိုင်ရေး စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ များစွာရှိသည့် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအားဖိတ်ခေါ်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် စီမံ လျက်ရှိကြောင်း၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ လက်လီနှင့်လက်ကား ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအတွက် စျေးကွက် စီးပွားရေးတံခါးဖွင့်ဝါဒနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စက်သုံးဆီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းအား ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အပြည့်အဝ လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ခွင့် အား ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရာ ယနေ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ပေါင်း ၂၄၀၀ ကျော်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသောလောင်စာဖြစ်သည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် (Liquefied Petroleum Gas - LPG) သည် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း မီးဖိုချောင်သုံးလောင်စာအဖြစ် ပိုမိုအသုံးပြု လာကြောင်း၊ ယနေ့ ဇီဝလောင်စာ (Biomass Fuel) သုံးစွဲမှုသည် ၆၃ % အထိရှိနေပြီး၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုမြင့်မား၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုရှိကြောင်း၊ Biomass Fuel အား LPG နှင့်အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းဖြင့် အဆိုပါ သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအား များစွာကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် LPG အား မြို့ပြသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်လည်း တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည် ပုဂ္ဂလိကမှ LPG လုပ်ငန်း တွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အားပေးပံ့ပိုးလျက်ရှိပြီး LPG တင်သွင်း၊ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာ လိုင်စင်များအား ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအပြင် လိုအပ်သော အခြေခံ အဆောက်အဦးများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကူအညီများ လိုအပ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ကြောင်း၊ လိုအပ် သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ပံ့ပိုးကူညီသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပူးပေါင်း​မှုသည် အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးကူညီပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားတွင် သီးသန့်ဆွေးနွေးမည့်ကဏ္ဍ ၆ ခု၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများမြှင့်တင်ရေး၊ ရင်ဆိုင်ရမည့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်အဖြေရှာ ခြင်း၊ အဆင့်မြင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဆန်းသစ်သော ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ စသည်တို့အား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် အလွန်နှစ်ခြိုက်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး အလွန် အကျိုးထူးသည့် အခမ်းအနားဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အခမ်းအနားမှ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ကြုံတွေ့ရမည့်စိန်ခေါ်မှုများအပေါ် အဖြေရှာခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ၁၀၀ % လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အဝဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲ၍ ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအမံများ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးတို့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ယနေ့ အခမ်းအနားအား တက်ရောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြမည့် ဧည့်သည်တော်များ၊ အခမ်းအနား ဖြစ်မြောက်ရေး ပံ့ပိုးကူညီပေးသော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံးနှင့် Business France Office တို့၏ ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့် ပြည့်စုံသောအစီအစဉ်များအတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy မှ အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး Myanmar Energy and Electricity Strategy နှင့် Cooperation , National and International Funds Agencies Strategy in the region , Panel Discussion အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တွေ့ရှိနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ၊ Off-Grid ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုအခြေအနေများ၊ ဓာတ်အားသွယ်တန်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေး အပိုင်း၊ ​ရေကာတာနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ အကြီးစားပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ စသည့်အကြောင်းအရာဆိုင်ရာတို့အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးကြပါသည်။